Ebe Iji Agba Chinese New Year Na Europe | Save A Train
Home > ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ > Ebe Iji Agba Chinese New Year Na Europe
site Laura Thomas 14/01/2019
Train njem Britain, Train njem France, Train Travel Holland, Train njem Spain, ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ
(Emelitere ikpeazụ On: 15/01/2020)
egwú dragons, unicorns, na-efe efe ezì. Ee, ezi! Agba The Year nke Ezi, Agba Chinese New Year na Europe!
Chinese New Year, makwaara dị ka Spring Ememme ma ọ bụ ememme Afọ Ọhụrụ, bụ ihe kasị mkpa mere ná Chinese kalenda. Ọ na-a pụrụ iche akara ezinụlọ nnọkọ, nri ememe, àjà na ụlọ arụsị, na – n'ezie – ezimezi oku. E nwere ihe pụrụ iche na-eme ememe Chinese New Year na Europe. Ọ bụ a ohere pụrụ iche iji na-ekere òkè oge ochie Chinese omenala, -akpa azụ 4000 afọ. Ahapụkwala na ya mgbe ị na-enwe ohere!
No.1 for Celebrate Chinese New Yearna Europe| Madrid, Spain
The ọnụ ọgụgụ nke Chinese ndị bi na Spain ka toro ukwu na-adịbeghị anya, na mmụba a na e gosipụtara site na ọkwa nke Chinese New Year ememe na mba. na 2019, ịtụ anya ihe dị iche iche.
N'ihi na nke atọ afọ na-agba ọsọ, na Spanish isi obodo bụ ebe Agba Chinese New Year na Europe na Spain, na a na omenala na festive omume a haziri ahazi nke Chinese Embassy. Concerts, noo, n'okporo ámá parades, na gastronomic ụzọ gasị will all be part of the festivities held in the Usera district – home of Madrid’s Chinatown.
Paris bụ akpa obodo ị na-eche nke mgbe eche echiche banyere ebe usọrọ Chinese New Year na Europe. Ma nke a kpokọtara ihunanya obodo ghọọ obodo nke Chinese ememe n'oge ememe.
Paris bụghị naanị banyere flashy parades na-esi ọtụtụ decorations ezie. Ya kasị mma-na-ezo ezo n'elu oge a bụ abụọ Buddha ụlọ nsọ ndị dị na nke 13 district. Ebe ezinụlọ si China, Vietnam, na Cambodia abịa ịkwụ ụgwọ ha banyere na-anabata na Afọ ọhụrụ. Enwe demonstrations of Chinese nkà na crafts, nri na omenala agba egwú na music. Lee obodo ọkụ n'ezie ndụ ruo ya aha a oge nke afọ. Na ihe ndị kasị mma i nwere ike ụgbọ okporo ígwè eme njem site na Paris na Amsterdam na usọrọ ma obodo!
Amsterdam, mba netherland
fun eziokwu: Amsterdam nke aha ọjọọ Red-Light District bụ n'ụlọ ka a n'ezie Buddha temple. Kwa afọ, I nwere ike Agba Chinese New Year na Europe na Amsterdam na gburugburu The Ọtutu utari; Guang Shan Ọ Hua na a pụrụ iche usoro ihe omume.
Nke a na akụkụ nke obodo nwekwara oké ma ọ bụrụ na ị nwere agụụ maka authentic Chinese nri. Jidere onwe gị a nri na ama See Obí (Europe mbụ sere n'elu Chinese restaurant) ma ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ndị na Chinese ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Geldersekade.
The ikpeazụ Agba Chinese New Year na Europe | England
London England na-ewe mpako na-etu ọnụ na ọ na-esetịpụ kasị ibu n'ụwa ụzọ usọrọ Chinese New Year na Europe, mpụga nke Asia. Ya mere, N'ezie nke a bụ otu kụrụ mgbe ị Agba Chinese New Year na Europe.
Nke a obodo esetịpụ a otu ụbọchị ememme nnukota onu juru n'ọnụ na-eme tinyere ọdịnala nri, kwa afọ Nme, egwú na omenala crafts. (Ị nwere anyị na omenala nri!) Gụọ anyị na!
E nwere atọ isi ebe England nke jide ndị a ememe; Trafalgar Square, Chinatown na Shaftesbury Avenue. Onye ọ bụla pụrụ iche na kpọmkwem na-eme na ihe ha na-enye; ọbịa ga-nwere ike oge nhọrọ nke ime.
Chinatown awade ndị kasị mma nke kacha mma na okwu nke omenala nri. Jide n'aka na ị akwụkwọ n'oge iji nwetara a table na otu n'ime ọtụtụ fabulous ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Chinatown ego n'anya decked ke kasị fabulous nke decorations na kechioma red lanterns na ọkọlọtọ. Chinese na-agba egwú dị iche iche na performers nwere ike hu guzobere na ọtụtụ nkebi ofụri. London nwere ike a ọhụrụ ahụ bịaranụ na Chinese New Year idaha ma kwa afọ na-aghọ ibu na mma na anyị nwere ike na-eche na-ahụ ihe na-eme na 2019!
Gịnị bụ ụzọ kasị mma Agba Chinese New Year na Europe na-esi n'otu n'ime obodo ndị? site Train, n'ezie! Iji SaveATrain ka akwụkwọ ndị kasị mma ndibiat na nkeji!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/celebrate-chinese-new-year-europe/ – (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#chinesenewyear #yearofthebpig europetravel longtrainjourneys Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem travelamsterdam travelfrance
Train njem, ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ, Travel Europe
Train njem Austria, Train njem Britain, Train Travel Czech Republic, Train njem France, Train njem Italy, Travel Europe
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Ka 2020Jun 2020Jul 2020Aug 2020Sept 2020Oct 2020Nov 2020Dec 2020Jan 2021Feb 2021Mar 2021Apr 2021